Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. डेंगु नियन्त्रण गर्न सरकारको ‘खोज र नस्ट गर’ अभियान – Emountain TV
डेंगु नियन्त्रण गर्न सरकारको ‘खोज र नस्ट गर’ अभियान
काठमाडौं, २६ साउन । पछिल्लो समय डेंगुको संक्रमण बढ्दै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी देखिएको डेंगुको संक्रमण सबै प्रदेशमा देखिएको छ । डेंगुको संक्रमण बढ्दै गएपछि यसको नियन्त्रणका लागी सरकारले खोज र नस्ट गर अभियान समेत गरिरहेको छ ।
ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको विगत ५ वर्षको तथ्याङक हेर्दा नेपालमा डेंगुको संक्रमण बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । तथ्याङक अनुसार प्रदेश १ मा डेँगुको संक्रमण सबैभन्दा बढि छ । प्रदेश नम्बर १ मा गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १९ जनामा भेटिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ हजार एक सय ५२ जनामा यसको संक्रमण भेटिएको हो ।
प्रदेशक १ को पनि सुनसरी जिल्लामा सबै भन्दा बढि ३ हजार २५ जनामा यसको संक्रमण भेटिएको हो । महाशाखाको तथ्याङक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशभर ८ सय ११ जनामा भेटिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ हजार ४ सय २५ जनामा भेटिएको छ । त्यस्ौले यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागी सरकारले खोज र नस्ट गर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सरकारले अहिलेसम्म बढि प्रभावित क्षेत्रहरु चितवन, महोत्तरी, झापा, सुनसरी, धादिङ लगायतमा अभियान सञ्चालन गरिसकेको छ भने अन्य ठाउँहरुमा पनि सञ्चालनको तयारी गरिएको महाशाखाले जनाएको छ । अभियानमा विभिन्न जिल्लाहरुमा गएर प्रत्येकको घर घरमा रहेका पानी जम्ने र संक्रमण फैलन सक्ने ठाउँहरु खोजेर नस्ट गर्नुको साथै जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गर्ने गरिएको छ । तर यस्लाई नियन्त्रण गर्नको लागी व्यक्ति स्वयंले वातावरणीय सरसफाईलाई ध्यान दिनु पर्ने सरोकारवालाको भनाई छ ।
डेंगु लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने एक किसिमको संक्रामक रोग हो । डेंगुको भाइरसद्वारा संक्रमित भएको एडिस एजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेले यो रोग सार्दछ ।
नेपालमा पहिलो पटक सन् २००४ मा चितवनमा एक विदेशीमा यो संक्रमण भेटिएको थियो । त्यसयता नेपालमा यस रोगको संक्रमण फैलँदै गएको हो । अहिले ३ हजार भन्दा बढी नेपालीमा यसको संक्रमण देखिएको छ।
शिक्षण अस्पतालमा आगलागी